မွေးကင်းစနှင့် မေမေ့ကိုယ်ထိတွေ့မှု – Burmese Baby
မေမေ့ဗိုက်ထဲမှ ထွက်လာသော မွေးကင်းစကို သူနာပြုဆရာမလေးက သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသည်နှင့် ကိုယ်လုံးတီးကလေးကို မေမေ့ရင်ဘတ် အရေပြားပေါ်တိုက်ရိုက်အပ်ထားပြီး ကလေးကျောပေါ် စောင်နွေးနွေးလေး ခြုံထားပေးပါ။ မိခင်လည်း စောင်ခြုံထားနိုင်သည်။
မွေးပြီး ပထမတစ်နာရီအတွင်း မေမေ့အရေပြားနှင့် ကလေးအရေပြားကို ကြာနိုင်သလောက်ကြာကြာ ထိတွေ့ခြင်းက အကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်း ကလေးကြပ်မတ်ဆောင်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း သုတေသနလုပ်သူများက တွေ့ရှိသည်။
💞မီးဖွားခြင်းမှ ရရှိသော မိခင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း နာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေသည်။
💞မိခင်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု စိတ်ပူပန်မှုများ လျော့နည်းစေသည်။
💞ကလေး၏ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူသည့် ပုံစံ၊ သွေးထဲမှ အောက်စီဂျင်ပမာဏနှင့် သကြားဓာတ်တို့ကို မူမှန်စေသည်။
💞ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူအအေးမျှအောင် အပြည့်အဝ မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးသော ကလေးအား မိခင်၏ကိုယ်မှ အနွေးဓာတ်ကို မျှဝေပေးသည်။
💞ကလေးကို သိသိသာသာ အငိုနည်းစေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေသည်။
💞ကလေး၏ဦးနှောက်ကို နိုးကြားမှု ပိုစေသည်။
💞ကလေး၏ မွေးရာပါပင်ကိုယ် နို့စို့နိုင်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေး၍ မိခင်နို့တိုက်ခြင်းကို ပို အောင်မြင်စေပါသည်။
မွေးခန်းမှ ထွက်လာပြီးလျှင်လည်း မိခင်နှင့် ကလေး အရေပြားချင်း ထိတွေ့မှု များနိုင်သလောက်များပါစေ။ အကယ်၍ ကျန်းမာရေး အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် မိခင်က မွေးပြီးပြီးချင်း မလုပ်ပေးနိုင်လျှင် ဖခင်၏ ရင်ဘတ်အရေပြားပေါ် ကိ်ုယ်လုံးတီးကလေးကို တင်ပြီး ဖက်ထားပေးပါ။ 👨‍👦 👨‍👧
မွေးကင်းစ၏ အရေးကြီးသောပထမတစ်နာရီတွင် မိဘနှင့် အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုကို ကျန်းမာရေး အကြောင်းကြောင့် မဟုတ်လျှင် အနှောင့်အယှက်မခံပါနှင့်။ အပျက်စီးမခံပါနှင့်။ မိဘနှင့် ကလေး ပထမတစ်နာရီတွင်း အရေပြားချင်း ထိတွေ့ခြင်း၏ စွမ်းပကားက တန်ဖိုး ကြီးမားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Reference- Skin To Skin Contact in newborn; KK Women & Children’s Hospital, Singapore. Medscape for health professionals.
နုံးခွေ၍ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မလုပ်ချင်သော ကလေးများ